Guddoomiye ku-xigeenkii degmada Howlwadaag oo la dilay. - Wargeyska Faafiye
Guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa saaka lagu dilay magaalada Muqdisho.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in rag hubeysan oo watay gaari ay rasaas ku fureen gaariga uu watay marxuumka, kuwaas oo goobta ka baxsaday kaddib markii ay falka dilka ah geysteen.
Waxaa sidoo kale weerarka lagu dilay darawalkii mas’uulka la dilay iyo labo qof oo rayid ahaa. Waxaa sidoo kale dhacdada uu dhaawac ka soo gaaray ilmo yar oo ay haleeshay rasaastii ay fureen raggii weerarka geystay.
Waa weerarkii saddexaad oo noociisa ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho wax ka yar 24 saac.
Taliyihii waaxda socdaalka ee garooka diyaaradhaa Muqdisho ayaa shalay lagu dilay weerar noocaan oo kale ah, halka mid kale la rabay in lagu dilo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, balse wuu ka badbaaday qorshaha lagu qaarijin rabay, walow lagu dilay darawalkiisa iyo askari waardiyeynayay asaga.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsDegmada Kaxda ee Gobolka Banaadir oo si nabad Gelyo ah looga ciidayKenya oo lacag ku bixineysa soo qabashada labo Sargaal oo katirsan Al-ShabaabAfghan Vice President Fahim Qassim dies at 57.Abaalmarin Caalamiya oo la Siiyay Sheekh Somali ah.Puntland oo baaraysa dilkii wariyaha.